एमसिसीबारे प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत पढेर भीम रावललाई सुनेपछि :: अमित ढकाल :: Setopati
अमेरिकी सहायता परियोजना 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन' (एमसिसी) बारे सत्तारुढ नेकपाभित्र रस्साकसी जारी छ। एमसिसीबारे निर्णय गर्न नेकपा सचिवालय बैठक मंगलबार बालुवाटारमा बस्दैछ।
एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले यी सबै विवाद सतहमा आएका हुन्। एमसिसी सम्झौतामा कहीँ पनि नेपालको संविधानभन्दा माथि भनेर लेखिएको छैन। बरू एमसिसीको 'नेगोसिएसन' बेला नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको 'एड मेमोयर' मा प्रस्टसँग एमसिसी 'नेपालकाे संविधानभन्दा माथि हुने छैन' भनेर लेखिएको छ।
नेपालका तर्फबाट त्यसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यसै पनि कुरा स्पष्ट छ— कुनै पनि देशसँग गरिने सन्धि-सम्झौता दुई देशका संविधानको अधीनमा रहेर गरिन्छ, त्योभन्दा माथि रहेर होइन। तर, कतिपय मानिसलाई एमसिसी संविधानभन्दा माथि राखिएको भ्रम छ।
भीम रावलले पनि सेतोपाटीमा प्रकाशित भिडियोमा 'एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानमाथि रहेको' भनेका छैनन्। तर, नेपालको 'कानुनमाथि रहेको' भन्ने उनको जिकिर छ। के त्यो सत्य हो? यसलाई विस्तृतमा हेरौं।
एमसिसी आयोजनाबारे अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा भएको अन्तिम 'नेगोसिएसन' मा नेपालका तर्फबाट सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व वर्तमान वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए। उनी त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको विदेशी सहयोग विभाग प्रमुख थिए।
सन्धि ऐन ९.१ मा लेखिएको छ— 'संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ।'
सेतोपाटीसँगको भिडिओ कुराकानीमा भीम रावलले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन पनि नेपालले मान्नुपर्ने व्यवस्था एमसिसी सम्झौतामा राखिएको आरोप लगाएका छन्।
विदेशी ऋण तथा अनुदान सम्झौताहरूमा काम गरेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस्ता सम्झौताबारे सामान्य व्यवहारिक ज्ञानको अभावमा यो विषय उठाइएको तर्क गर्छन्। परियोजना अवधि सकिए पनि हिसाब फरफारक गर्न, लेखापरीक्षण सकाउन, अनुदानको पैसा बाँकी रहेछ भने त्यसलाई फिर्ता लैजान, अनुदान दिनेले भविष्यमा पनि परियोजना सुपरीवेक्षण गर्न लगायत कामका लागि 'सर्भाइवल ल' को व्यवस्था गरिने सामान्य प्रचलन भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
रावलले सेतोपाटीको भिडिओमा भनेका छन्, '… एमसिसी सम्झौताअनुसार स्थापित हुने सबै संरचनामा एमसिसीको अनिश्चितकालीन नियन्त्रण र स्वामित्व हुने उल्लेख छ, जसले हाम्रो स्वाधीनतामा आँच पुग्छ।'
कुनै पनि मुलुकले 'म तिम्रो देशमा अनुदान दिएर एउटा परियोजना बनाइदिन्छु, तर त्यसको नियन्त्रण र स्वामित्व अनिश्चितकालका लागि मेरो हुनुपर्छ' भनेर आजको दुनियाँमा भन्न सम्भव होला? हामी वा कसैले त्यो मान्छ होला?
तर रावलको तर्क छ, 'जुन एमसिए-नेपाल गठन भएको छ, त्यसलाई एमसिसी अमेरिकाले निर्देशन दिन्छ। त्यो नेपाल सरकारका सचिवको नेतृत्वमा भए पनि त्यसलाई नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन दिन सक्दैन। त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो एमसिए-नेपाल एमसिसी अमेरिकाप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ। र, त्यसले नेपाल सरकारको स्वनिर्णयको अधिकार कुण्ठित हुन्छ।'
सञ्चालक समितिमा एमसिसीको प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मात्र उपस्थित हुन्छ र समितिले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा उसको मताधिकार हुँदैन। एमसिए‍-नेपालले नै कर्मचारी नियुक्तिदेखि आयोजना कार्यान्वयनसम्मको काम गर्छ।
कि कर्मचारी जति सबै अरू नै देशको स्वार्थमा काम गर्छन्, तिनले नेपालको हितमा काम गर्दैनन् र तिनलाई अधिकार सुम्पनु भनेको नेपालको स्वनिर्णय अधिकार कुण्ठित गर्नु हो? जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरूले यति संकुचित दृष्टि राख्न मिल्छ?
'नेपाल सरकारले केही भन्न नमिल्ने भन्ने कुनै प्रावधान एमसिए-नेपालमा छैन,' अर्थका एक जना अधिकारीले भने, 'प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेका मन्त्रीले एमसिए-नेपालमा भएका आफ्ना प्रशासकसँग परियोजनाबारे कुरा गर्न नमिल्ने वा नगर्ने भन्ने त कुरै हुन्न। सबै जना सरकारकै अंग भएकाले धेरै कुरा त मौखिक सल्लाहमै चल्छ।'
एमसिसीअन्तर्गत बनाउन लागिएको सबभन्दा ठूलो योजना भनेको ट्रान्समिसन लाइन विस्तार हो। नुवाकोटको रातामाटेमा ठूलो सब-स्टेसन बनाउने र त्यसलाई एकातिर काठमाडौंको लम्सीफेदीसँग जोड्ने र अर्कातिर तनहुँ हुँदै बुटवल-भैरहवा भएर भारतको गोरखपुरसँग जोड्ने योजना छ।
यो योजनाबारे बोल्दै रावलले सेतोपाटीसँग भनेका छन्, 'एमसिसीमा जुन आयोजना छनोट भएका छन्, तिनलाई कतिपयले नेपालको प्राथमिकताका योजना भनेका छन्, त्यस्तो होइन। सन् २०१५ मा विश्व बैंकको सहयोगमा प्रसारण लाइनको गुरूयोजना बनेको थियो, जसअनुसार तराईमा र पहाडमा दुईवटा ठूल्ठूला प्रसारण लाइन बनाउने योजना थियो। त्यसलाई परिवर्तन गरेर यो रातामाटे-लम्सीफेदी-हेटौंडा-बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर लैजाने प्रसारण लाइनको योजना बनाइएको छ।'
उनीहरू भन्छन्, 'प्राधिकरणका गुरूयोजनाहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन्। ऊर्जाको उत्पादन, माग, बजार, बिजुलीलाई पावर हाउसबाट आन्तरिक वा बाह्य बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने चुनौतीअनुसार गुरूयोजनामा निरन्तर काम भइरहन्छ। त्यसैले कुनै बेलाको गुरूयोजनामा कुनै आयोजना थियो वा थिएन भन्नेले त्यो आयोजनाको महत्व वा भविष्य निर्धारण गर्दैन।'
प्राधिकरणका एक इञ्जिनियरले भने, 'जहाँसम्म एमसिसीअन्तर्गत बन्न लागेका प्रसारण लाइन र सब-स्टेसनहरूको कुरा छ, तिनको आउने १०-१२ वर्षसम्म आन्तरिक र बाह्य बजारका लागि ठूलो महत्व छ। अहिलेको अवस्थामा कम लागतमा बन्न लागेको राम्रो आयोजना हो यो।'
दोस्रो, आन्तरिक रूपमा पनि बिजुली ओहोरदोहोर गर्न अहिले बनाउन लागिएका ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। धेरै बिजुलीका धेरै आयोजना रहेको भोटेकोशी, खिम्ती करिडोरलाई पनि एउटा ट्रान्समिसन लाइनले लम्सीफेदीमा जोड्ने प्राधिकरणको योजना छ। खिम्ती-ढल्केबर अहिले नै ट्रान्समिसन लाइनबाट जोडिएका छन्। लप्सीफेदी र रातामाटेमा बन्ने सब-स्टेसनहरू अर्को ट्रान्समिसन लाइनले जोड्ने छन्। चिलिमे, गण्डकी करिडोरका आयोजना पनि रातामाटेसँग जोडिन्छन्। रातामाटेलाई हेटौंडासँग पनि जोड्ने काम हुँदैछ।
'भोलि हाम्रा लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारमा यसको ठूलो महत्व हुनेछ,' ती इञ्जिनियरले भने।
उक्त बैठकमा आमन्त्रित रूपमा रावल, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि उपस्थित थिए।
सेतोपाटीसँगको भिडिओ कुराकानीमा रावलले भनेका छन्, 'अमेरिकाको सुरक्षा नीति र हितको रक्षा नेपालले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।'
एमसिसी सम्झौता अमेरिकामा सन् २००३ मा बनेको 'मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट' बाट निर्देशित छ। सन् २००१ मा अलकायदाले अमेरिकामाथि हमला गरेपछि यो ऐन बनेको हो। अमेरिकाले संसारभरका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आवश्यक सहयोग नगरेको, त्यसले गरिबी बढाउन र आतंकवादलाई जरो गाड्न सहयोग पुगेको भन्ने आलोचनाको पृष्ठभूमिमा यो ऐन आएको हो।
एकछिनलाई मानिलिऊँ, 'नेगोसिएसन' टेबलमा अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालसँग त्यस्तो प्रस्ताव राखे रे। नेपाल सरकारका जुन अधिकारीहरू वासिङ्टन डिसीमा भएको छलफलमा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त मान्न तयार भएनन्, उनीहरूले अमेरिकी सुरक्षा नीति वा स्वार्थ मान्नुपर्ने सर्त माने होलान्?
भीम रावलले सेतोपाटीसँगको भिडिओ कुराकानीमा अमेरिकी सेना आउनेबारे कुनै कुरा बोलेका छैनन्। योभन्दा अगाडि पनि उनले एमसिसी परियोजना आयो भने अमेरिकी सेना आउँछ भनेका छैनन्। तर, रावलले सुरूदेखि नै एमसिसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको दाबी गरेका थिए। त्यसैले, एमसिसी परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा छिर्नु हो भन्ने उनको दाबी अहिले पनि कायम देखिन्छ। सायद यही तर्कमा टेकेर कतिपयले एमसिसी लागू भए अमेरिकी सेना आउँछ भनेर लेखेका छन्।
यसमा तीनवटा तथ्य हेरौं— पहिलो, अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट सन् २००३ मा पास गरेको हो। एमसिसी गठन सन् २००४ मा भएको हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइपिएसबारे पहिलोपटक सन् २०१७ नोभेम्बरमा भियतनाममा बोलेका थिए। सामान्य चेत प्रयोग गरौं, सन् २००४ मा जन्मिएको एमसिसी कसरी सन् २०१७ मा जन्मिएको आइपिएसको अंग भयो?
दोस्रो, एमसिसीअन्तर्गत विश्वका झन्डै ५० विकासशील मुलुकले सहायता लिएका छन्। त्यसमध्ये दर्जनभन्दा बढी मुलुक अफ्रिकाका छन्। एमसिसी इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको भए अफ्रिकी महादेशमा पर्ने मुलुक कसरी यसको सदस्य हुन्थे?
इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिबारे पहिलोपटक भियतनाममा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए, 'हामी लामो समयदेखि मित्र, साझेदार र द्विपक्षीय गठबन्धनमा छौं र धेरै लामो समयसम्म रहिरहने छौं।'
उनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अर्बौं जनसंख्या बस्ने ३५ भन्दा बढी मुलुकमा खुला र स्वतन्त्र समाज, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, सुशासन र समुद्रसम्म खुला पहुँचमा जोड दिएका थिए। आइपिएस अमेरिकी सरकारको अवधारणा हो, त्यसमा कसैले हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन। कोही त्यसको सदस्य बन्नुपर्दैन। किनभने, त्यो द्विपक्षीय सहमति नै होइन। यो क्षेत्रलाई हेर्ने अमेरिकाको 'फ्रेमवर्क' मात्र हो, इन्डो-प्यासिफिक गठबन्धन होइन।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रसम्बन्धी केही महिनाअघि मात्र प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन, 'अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक: एड्भान्सिङ अ सेअर्ड भिजन' ले पनि अमेरिका कसरी यो क्षेत्रमा साझेदारी बढाउन र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयत्नरत छ भन्ने देखाउँछ।
उक्त प्रतिवेदनले 'आसियान'लाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको भौगोलिक केन्द्र भन्छ। आफ्नो रणनीतिका लागि पनि यो क्षेत्रको केन्द्रीय भूमिका छ भन्छ। भारतसँग आफ्नो रणनीतिक साझेदारी रहेको र दुवै मुलुकको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा समान धारणा रहेको भन्छ। यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चीन, भारत, अमेरिका सबै आ-आफ्नै हिसाबले प्रयत्नरत छन्। उनीहरूको सामरिक नीतिको अंग नबनी, सैन्य गठबन्धनको सदस्य नबनी हामीले तीनै शक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने हो। हाम्रो हित बढाउने हो। चीनको बेल्ट‍-एन्ड-रोडमा नेपाल नजाओस् भन्ने चाहना सायद भारतको थियो। तर हामी गयौं, जानै पर्थ्यो।
त्यसमा आइपिएस भन्ने एक शब्द पनि उल्लेख छैन। त्यो सम्झौताभन्दा बाहिर अमेरिकाले के गर्छ, हामीलाई के चासो? हामीले गरेको सम्झौताबाहिर चीनले के भन्छ वा गर्छ, हामीलाई के चासो? त्यो चासो राख्ने हैसियतमा हामी छौं?
त्यसको अर्थ, अहिले अमेरिकी दूतावास र युएसएआइडीअन्तर्गत चल्ने सबै परियोजना नै आइपिएसका अंग हुन्। अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले भने आइपिएस र एमसिसी फरक कुरा भएको बताउँदै आएका छन्।
रावलको इमानमाथि हम्मेसी खोट लगाउने आँट कसैले गर्दैन। हरके विषयमा तयारी गर्ने उनको बानी छ। त्यसका लागि उनीसँग पर्याप्त जाँगर र ऊर्जा छ। उनी मन्त्री रहेको सरकारका एक मुख्यसचिवले मसँग एकपटक भनेका थिए, 'सिंगो मन्त्रीमण्डलमा भोलिपल्टको मन्त्रिपरिषद मिटिङको एजेन्डाबारे चासो राख्ने, भरसक सबै फाइल घरै लगेर तयारी गरी आउने उनी एक मात्र मन्त्री हुन्।'
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको आइपिएससम्बन्धी दस्तावेजमा नै उसले अर्बौं जनसंख्या भएको, ३५ भन्दा बढी मुलुक रहने क्षेत्र भन्छ। यो क्षेत्रका यति धेरै मुलुक अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन सम्भव छैन। यो क्षेत्रका चार मुलुक जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स मात्र घोषित रूपमा अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा छन्। भारत, जोसँगको बढ्दो घनिष्टता र भविष्यको सम्भावनाका कारण अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी नामकरण गर्‍यो, त्यो मुलुक पनि अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा छैन।
रावलले आफ्नो भनाइ संशोधन गरेर आजकाल 'आइपिएसमा अमेरिकाको सुरक्षा चासो छ, यो सुरक्षा रणनीतिको अंग हो' भन्न थालेका छन्। त्यसमा सत्यता हुन सक्छ।
रावल मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पनि एमसिसीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 'कर्नर' मा पार्ने रणनीतिमा रहेको भान हुन थालेको छ। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको चपेटामा एमसिसी पर्‍यो भने दुर्भाग्य हुनेछ। सवाल ५० अर्बको अनुदान गुम्ला भन्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विश्वसनीयता गुम्ला भन्ने हो।
हामीले एमसिसी फिर्ता पठाएपछि त्यसले एउटा मानक स्थापित गर्ने छ— भोलि अरू मुलुक वा संस्थासँग एमसिसीभन्दा राम्रो सर्तमा मात्र सहयोग लिन पर्नेछ। यो हाम्रा लागि मानक होइन, आफैंलाई पासो हुनेछ।
यसलाई सुधार गर्ने ठाउँ छ भने, के र कसरी गर्ने सल्लाह गर्नुस्, अमेरिकीहरूसँग 'गुड फेथ' मा कुरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुस्। एमसिसीमा सुधार गर्ने ठाउँ नै छैन भन्ने पक्कै होइन। त्यसका लागि प्रयत्न गर्ने कोशिस गर्नुस्।
तर, कसैलाई त्यस्तो लागेको भरमा र कसैको सनकको भरमा अहिलेको अप्ठ्यारो समय मुलुकलाई लामो समय घात हुने निर्णय गर्ने अधिकार तपाईंहरूलाई पनि छैन। (यो लेख पहिलो पटक २०७७ जेठ २७ गते प्रकाशित भएको थियो।)
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १६, २०७८, ०३:०४:००